मलेसियाबाट ३१ हजार कामदारको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मलेसियाबाट ३१ हजार कामदारको माग
काठमाडौँ — मलेसियामा दुई महिनामै ३१ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारको माग भएको छ । झन्डै सात महिना रोकिएको श्रमिक पठाउने प्रक्रिया खुलेपछि मलेसियाबाट छोटो समयमै नेपाली कामदारको ठूलो संख्यामा माग भएको हो ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले दुई महिनामा ३१ हजारभन्दा बढी कामदारको माग प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ । दूतावासले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी असोज तेस्रो सातादेखि मंसिर १४ सम्मको अवधिमा ३१ हजार २ सय १ श्रमिक माग भएकामा ९ सय ६३ मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
मलेसियाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा १७ हजार १ सय १६, सेवा क्षेत्र (सुरक्षा गार्डसहित) मा १० हजार १ सय ८३, कृषि क्षेत्रमा एक हजार ४ सय ७५, ‘प्लान्टेसन’ मा एक हजार ३ सय ९७ र निर्माण क्षेत्रमा एक हजार ३० श्रमिकको माग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती मागपत्र प्रमाणीकरण गरी विभागमा पठाइएको दूतावासले जनाएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सरल, पारदर्शी र चुस्त बनाइएको समेत दूतावासले विज्ञप्तिमा छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङका क्रममा नेपाली ठगिँदै आएको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले झन्डै सात महिनासम्म मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेका थिए । मलेसिया र नेपालबीच पटकपटक भएको वार्तामा स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङमा नेपाली कामदार नठगिने प्रत्याभूति गर्ने सहमति भएपछि असोज तेस्रो सातादेखि मलेसियाको रोजगारी खुलेको हो । सहमतिसँगै मलेसियाबाट नेपाली कामदारको माग हुन थालेको हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको कामदारको नियुक्ति, रोजगारी तथा घरफिर्तीसम्बन्धी समझदारीअनुसार मलेसियाली सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भई आएका मागपत्र अभिलेखीकरण गरी विभागमा सिफारिस गर्न थालिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ २१:५२
प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न २ देखि ४ महिना लाग्न सक्ने
डाक्टरहरू भन्छन्– कमजोर मिर्गौलाले शल्यक्रिया, संक्रमण आदि जटिलता झेलेकाले नियमित डायलसिसमा जानुपर्ने हुन सक्छ
मंसिर १७, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण दुईदेखि चार महिनापछि सर्ने भएको छ । अघिल्लो मंगलबार आकस्मिक रूपमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्नुपरेकाले मिर्गौला प्रत्यारोपणको समय धकेलिएको डाक्टरहरूले बताएका छन् । ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न शल्यक्रिया गरिएको ठाउँको घाउ निको हुनुपर्छ । संक्रमण पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । अहिलेकै स्थितिमा जोखिम हुन्छ,’ वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा गत शुक्रबार डा. रमेशसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री अस्पताल आउँदा धेरै बिरामी रहेको र शल्यक्रियापछि संक्रमणको असर पेट र रगतमा समेत परेको बताएका थिए। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सोचेभन्दा बढी राम्रो सुधार देखिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ २१:४४